भाईरल २ बर्षिया बालिका: गाईन “डिम्पल पर्ने गाला” गीत, चकित बनाउदै गरिन यस्ता कुरा ! (भिडियो हेर्नुहोस)
काठमान्डौ- टक देखि युटुब सम्म भाइरल भएकी २ बर्षीय बालिका साईलिन श्रेष्ठको अभिनयमा नया गीत बजारमा आएको छ।संजीत श्रेष्ठको युटुब च्यानल मार्फत बजारमा आएको उक्त गीतमा सिलिनकि आमाले अभिनय गरेकी छिन।
टिक टक देखि युटुब सम्म भाइरल भएकी २ बर्षीय बालिका सिलिन श्रेष्ठको अभिनयमा नया गीत बजारमा आएको छ।संजीत श्रेष्ठको युटुब च्यानल मार्फत बजारमा आएको उक्त गीतमा सिलिनकि आमाले अभिनय गरेकी छिन। अहिले उनी एकदमै भाईरल छिन । आउनुहोस आज हामी उनै बालिका संगको कुराकानी सुनौ । भिडियो हेर्नुहोस ।
* बच्चालाई कसरी सिकाउने ?
बालबालिकाको सही विकासका लागि सही शैक्षिक वातावरणको कुरा उठाउँदै त्यसमै केन्द्रित रहेर उनले धेरै पुस्तक पनि लेखेका छन् । पुस्तकहरुमार्फत उनले बालबालिकाको सार्थक सिकाइ र विकासका लागि घरको वातावरण महत्वपूर्ण हुनेमा अभिभावकको ध्यानाकर्षण गर्दै शिक्षकलाई समेत जिम्मेवार हुन आग्रह गरेका छन् ।
बच्चालाई सारा काम आफैं गर्न दिनुस्
घर यदि आमा-बुवाले आफूले जस्तोसुकै आचरण गरे पनि
विद्यालयमा गाली सुन्छ
बच्चाहरुको गुरु बनेर मैले उनीहरुको गुरु-पद बुझ्न सकेँ । स्रोत: अनलाइन खबर ।